आज पिएसएलको अक्सन, कति नेपाली खेलाडीले अवसर पाउलान् ? - Vishwanews.com
आज पिएसएलको अक्सन, कति नेपाली खेलाडीले अवसर पाउलान् ?
काठमाडौं । पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) को २०२१ सिजनका लागि नेपालबाट १० खेलाडी ड्राफ्टमा परेका छन्। उनीहरुको भविश्यबारे आज अक्सन हुनेछ । यसमध्ये सन्दीप लामिछाने ड्राफ्मा सबैभन्दा उच्च तलव पाउने श्रेणीमा छन् । अन्य ९ खेलाडी भने दोस्रो श्रेणीमा रहेका छन् ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित १० खेलाडीलाई कुन कुन टीमले आवद्ध गर्नेछन्, त्यो भने आजै निश्चित हुनेछ । नेपालबाट प्लेटिनम क्याटेगोरीमा सन्दीप लामिछाने छन् ।
सिल्भर क्याटेगोरीमा पारससहित ९ खेलाडी रहेका छन् । नेपालबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उप कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, करण केसी, कुशल मल्ल, पारस खड्का, अभिनाष बोहोरा, पवन सरार्फ, सुवास खकुरेल र आसिफ शेख परेका छन् ।
ड्राफ्टमा एक टोलीले कम्तीमा १६ र बढीमा १८ खेलाडी अनुबन्धन गर्न पाउने नियम छ । १६ मध्ये ११ खेलाडी भने पाकिस्तानी हुनुपर्छ । २० देशबाट ४ सय भन्दा बढी विदेशी खेलाडी पिएसएल ड्राफ्टमा छन् । प्रतियोगिता फेब्रुअरी २० देखि २२ मार्च सम्म चल्नेछ ।